Mina Mangal vehivavy malaza ao Afghanistan: Maty nisy nitifitra tamin’ny andro mazava · Global Voices teny Malagasy
Mamely vehivavy sy mpiasan'ny fampahalalam-baovao indray ny mpamono olona
Voadika ny 06 Jona 2019 6:59 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, Ελληνικά, Italiano, ਪੰਜਾਬੀ, বাংলা, English
Mina Mangal. Pikantsary avy amin'ny lahatsary navoaka tao amin'ny fantsona Youtube an'i Suhrab Samadi tamin'ny 11 May.
Satria mametraka fisalasalana momba ny zava-bitan'i Afghanistan vao haingana ny fisian'ny fifandonana sy ny tsy fandriampahalemana, nijoro ho mariky ny fandrosoana ny endrik'i Mina Mangal – mandra-pamonoana azy ho faty tamin'ny 11 May.
Tamin'ny fotoana nahafatesany, mpanolotsaina tao amin'ny antenimieran'i Afganistana i Mangal, 30 taona, ary nanana faniriana hanana fivoarana eo amin'ny sehatra politika.
Saingy malaza kokoa eo amin'ny Afgàna izy amin'ny maha-mpanolotra fandaharana azy amin'ny televiziona ho an'ny fantsona telo tsy miankina – Lemar TV, Shamshad TV ary Ariana TV – izay nanolorany programa kolotsaina maromaro, ary ho an'ny Ariana, fandaharanasa momba ny zon'ny vehivavy.
Nanampy tamin'ny fanavaozana ny tontolon'ny haino aman-jery ao amin'ny firenena ny fantsom-pahitalavitra tsy miankina toy izany taorian'ny tsy fisiam-baovao nandritra ny fitondran'ny Taliban.
Na dia mbola tsy mazava aza hoe iza no nitifitra an'i Mangal tany amin'ny faritra atsinanan'i Kabul, renivohitr'i Afghanistan teo amin'ny manodidina ny 7.30 ora maraina, nilaza tamin'ny BBC ny rain'i Mangal, Taleb Jan, fa nino izy fa vokatry ny “olana ara-pianakaviana” ny famonoana azy taorian'ny fisarahana tamin'ny vadiny taloha.
Nangataka ny Nai Media Institute mba hanazavan'ny governemantan'i Afghanistan raha misy ifandraisany amin'ny asany ny famonoana an'i Mina.
Saingy na inona na inona antony, nanohina ny fon'ny vahoaka noho ny famonoana ny antson'i Taleb tamin'ny manampahefana mba “hiaro ireo zanany vavy hafa sy ny vehivavy toa azy ireo izay mivoaka ny trano sy manompo ny fiarahamonintsika.”
Mampalahelo tokoa ny mandre izany, novonoin'ny olona tsy fantatra androany tany Kabul ilay mpanao gazety & mpanolotsaina ao amin'ny Parlemanta #MinaMangal. Vehivavy matanjaka be herim-po izy; RIP #Mina. Tsy izy no voalohany ary tsy ho farany (mampalahelo) nafoy. Fiarovana matanjaka ny vehivavy mpanao gazety! No tena ilaintsika
Endrika amin'ny fahitalavitra
Efa olo-malazan'ny media i Mangal talohan'ny nanendrena azy ho mpanolotsaina ara-kolotsaina ao amin'ny Wolesi Jirga, antenimiera ao Afghanistan, tamin'ny taona 2017.
Teraka tany amin'ny faritanin'i Paktia tamin'ny taona 1989 izy, nandany efa ho folo taona niasa tamin'ny media taorian'ny fampiofanana ho mpampivelona.
Vao haingana izy no tafiditra tao aminj'ny oniversite indray mba hahazoana mari-pahaizana taona fahatelo hafa, momba ny lalàna sy ny siansa politika tamin'ity indray mitoraka ity.
Mpanao gazety malaza tao amin'ny firenena i #MinaMangal izay maty notifirin'ny olona tsy fantatra androany. Manantena aho handry am-piadanana izy, tena malahelo azy aho, tsy misy olona mahavita zavatra betsaka ho antsika, milofo amin'ny asantsika mihoatra noho ny taloha isika
— Shawali kayhan🌀 (@KayhanShawali) May 11, 2019
Tohina tanteraka tamin'ny famonoana ilay mpanao gazety fahitalavitra teo aloha #MeenaMangal, tsy maintsy hoentina eny amin'ny fitsarana ireo nahavanon-doza
Nanoratra tao amin'ny Facebook vao haingana i Mangal tamin'ny 2 Mey fa nahazo fandrahonana izy saingy tsy nanondro ny loharano.
Lehilahy adala iray no nampahafantatra ahy fa eo ambany fandrahonana (ny aiko). Nolazaiko azy fa tiako ny fireneko ary ny zava-dehibe indrindra dia avy amin'Andriamanitra isika ary hiverina any Aminy, ary noho ny fahalehibeazan'Andriamanitra dia tsy misy afaka manisy ratsy ahy sy ny fireneko lehibe. Matesa ireo lehilahy izay mandrahona ny vehivavy. Fantatr'izy ireo hoe iza izy ireo ary raha mbola mandrahona ahy indray izy ireo dia ho ampahafantariko anao.
Nilaza ny fianakavian'i Mangal fa nanambady izy roa taona lasa izay, saingy vetivety dia nisaraka tamin'ny vadiny, izay nanararaotra azy ara-batana. Araka ny voalazan'ny fianakavian'i Mina, niaritra fandrahonana nandritra ny volana maro izy mandra-pahatonga ny fahafatesany.
Nilaza ampahibemaso ny rainy fa efa naka an-keriny azy indray mandeha ny rafozany taloha.
Nisioka ny Minisitry ny Solitany sy Fitrandrahana, Nargis Nahan fa niara-miasa tamin'ireo manampahefana ambony hafa mikasika ny fepetra politika hiarovana ireo vehivavy iharan'ny fandrahonana izy:
Miasa amin'ny fepetra hiantohana ny fiarovana ny vehivavy miatrika fandrahonana ny tenako sy i Hassina Safi, Minisitry ny Kolontsaina sy ny Fampahalalam-baovao, ary i Shahzad Akbar, Filoha lefitry ny Filankevi-piarovana
Zo an-taratasy, manjaka ny tsy fandriampahalemana
Niteraka adihevitra momba ny fiarovana nomena ny vondrona roa tonta [ vehivavy sy mpanao gazety] ny fahafatesan'ilay olo-malaza izay sady vehivavy no mpanao gazety.
Nandray anjara lehibe tamin'ny fanasongadinana ny herisetra mihatra amin'ny vehivavy ny haino aman-jery tsy miankina ao Afganistana, mahatonga ny tranga manokana momba ny herisetra ao an-tokantrano, herisetra ara-nofo ataon'ny andian-jiolahy, sy ny herisetran'ny vahoaka amin'ny vehivavy ho lasa adihevitra eo amin'ny sehatra nasionaly.
Maty nodorana i #Farkhunda, nalaina an-keriny, naolana sy novonoina i #BabyMahsa, notapahana ny oron'i #BibiAyesha, notoraham-bato ny vehivavy ary amin'izao fotoana izao, notifirina in-9 i #MinaMangal. Natao tamin'ny andro mazava ireo heloka rehetra ireo ary indrindra tany amin'ny tanàna renivohitra faritra maitso [voaaro] tao #Kabul. #StopKillingWomen
Tamin'ny May 2019, nitatitra momba ilay vehivavy bevohoka, Parisa, izay voalaza fa natsipin'ny vadiny sy ny fianakaviany teny ambonin'ny varavarankelin'ny efitra rihana faha-enina ny masoivohom-baovao tsy miankina malaza, Tolo News. Araka ny tatitra, noraisin'ny rafozany toy ny andevo i Parisa talohan'ny nahafatesany ary tsy afaka nitsidika ny fianakaviany manokana.
Manako mafy eny anivon'ny fiarahamonina ahitana fampiasana media izay mitombo haingana ny tantara tahaka izany.
Saingy raha tsy azo lavina ny herin'ny media antserasera sy ny fahitalavitra any Afganistana, dia toy izany koa ny nofiratsin'ny tsy fandriampahalemana isan'andro izay atrehin'ny mpanao gazety isan'andro isan'andro.
Tany am-piandohan'ity taona ity, nisy roa lahy tsy fantatra anarana niditra tao amin'ny onjam-peo teo an-toerana tao amin'ny faritanin'i Takhar ary nanomboka nitifitra mpanao gazety roa tao amin'ilay trano.
Namoy ny ainy avy hatrany ilay mpamoaka lahatsoratra, Shafiq Arya, 28 taona, sy ilay mpanolotra fandaharana, Rahimullah Rahmani, 26 taona. Lehilahy maro no nosamborin'ny polisy, izay tsy nanazava ny anton'ny fanafihana.
Ny tatitra navoakan'ny Reporters sans frontières tamin'ny volana Aprily dia nanambara fa taona nahafatesana mpanao gazety maro miasa ao amin'ny firenena hatramin'ny nirodanan'ny Taliban ny taona 2018, ka mpanao gazety 15 no namoy ny ainy tamin'ny daroka baomba sy vono olona nokendrena manokana.